Dareenka, Furayaasha iyo Muujinta - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Dareen, Furayaal iyo Muujin
Way dhacdaa. Wax kastoo nolosha ku dhaca, gudaha gudihiisa waad ogeyd inay dhici doonaan. Sideed ku ogtahay in 2 + 2 = 4? Maxay dareemeysaa inay ogaato taas? Waa ...
Nooca - Dareenka, Furayaasha iyo Muujinta
Waa maxay dareemo?
Ma jiraa qof run ahaantii hubin kara waxa uu dareemayo?
Sidee dareenku faa'iido u leeyahay?
Waa maxay furayaashu?
Maxay furayaasha furaan dadka dhexdiisa?
Sidee furayaasha loo heli karaa?
Immisa fure ayaa jira?
Door intee le'eg ayay muujintu ku leedahay qaddarka?
Sidee muujinta u dhacdaa?
Mudo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa muujinta inay dhacdo?
Sidee dadku u saameeyaan midba midka kale markay tahay muujinta?
Sidee tamarta loogu jiheeyo muujinta loo kordhin karaa?
Door noocee ah ayay tamarta togan iyo kuwa taban ku leeyihiin muujinta?
Suurtagal ma tahay in la muujiyo?
Maxay adduunyadu ugu muuqataa mid taban hadda?
Sideen ku ogaan karaa cida aan haayo ama sii daayo?
Waa maxay astath?
Maxay fikradaha xun xun u jiraan?
Sidee dadku ula xiriiri karaan Dunida?
Sidee True Is u xiriiraan?